China Abavelisi bePhedi yeSanti eNyameko kunye nabathengisi Xieyanshi
Ubumba ngenaliti yokubumba, kunye nokuqina okuphezulu kunye nokuqina.Ukulungela isantya esiphezulu, kunye nokunyamezela okuhle.
Espeacially yenzelwe umphezulu wokucoca, njengemoto, iglasi, inqanawa, umgangatho, njl Sihlala siyisebenzisa ngephedi yoboya, iphedi yegwebu ukuphucula ukuqaqamba.
Isetyenziselwa umbane okanye i-pneumatic angle grinder.Idiski enesiseko esithambileyo kunye nelastiki inokuhambisa umphezulu wobugcisa kwindawo yokugqibezela.
Umphezulu kunye anti-uvimba ukutyabeka, ukuthintela ukuvala esirhabaxa, ukwandisa ukusebenza disc.Ukuhluba umphezulu, umphezulu deburring kunye ukuxuba, ukulungiselela komhlaba, buffing, kunye ipolishi.Medium-ukukhanya stock ukususwa, beveling, deburring / deflashing, umhlwa ukususwa, ukudibanisa, ukucoca kunye nokugqiba, ipolishi.
I-1.Ifanelekile ukuba isandwe kwiindawo ezixineneyo kwaye igcine i-dising disc kwindawo yayo.
2.Ideal yokwenza izinto, i-DIY, ubugcisa kunye nemisebenzi yobugcisa, umzimba we-auto, i-drywall, ivenkile kunye nokusetyenziswa kweemoto.
Ezi zibloko zimthubi ziyafumaneka ngokuqina kunye nokuxinana okuthambileyo kulawulo olongezelelekileyo kwisanti yesandla kunye nasekugqityweni kwezicelo.
Ikhonkco eyomeleleyo kunye nokuncamathisela kwilog kuthintela ukutshintsha kwephedi kunye nokujikeleza, kodwa vumela ukususwa ngokulula kweediski zeesanding.
Izinto eziguqukayo ezidityanisiweyo kunye ne-ergonomic eyenzelwe ukuba izive ikhululekile kwiintendelezo.
Iphedi yesanti / iphedi yokuxhasa
5 ”6” (ubukhulu)
umlobothi wakho kunye neluphu
0H, 6H, 7H, 9H, 15H, 17H
tyheli / mnyama
Umbala weOrange MEDIUM FOAM PAD
Le pad linyathelo lesithathu kwiNkqubo yokuCoca, iOrange Medium Foam Pad icinene kakhulu kuyo
Kwisakhiwo kwaye yenzelwe ukususa amanqaku e-swirl, amabala amanzi kunye nokunye ukungafezeki kwepeyinti Le pad inochuku ngokwaneleyo kwizicelo ezininzi kwiinkqubo zebhatyi ecacileyo yefektri Hlala ulandela le pad ngokuncinci
indibaniselwano yepali / indibaniselwano yeplishi yokunyusa ukubengezela kunye nokuguda komphezulu.
IBlue POLISHING FOAM PAD
Le pad linyathelo lesine kwiNkqubo yokuPolisha.I-Blue Polishing Foam Pad yenzelwe ukususa ukukhanya kwe-swirl, iiholograms, udongwe olwenziwe ngodongwe, kunye nokunye ukungafezeki kwepeyinti. Le pad igqiba ngokugqwesileyo ngokujonga ubuchule bokucoca oomatshini ababonelelayo.
IPETYI YOMLAMO OBomvu WOKUGQIBELA
Olu phawu linyathelo lokugqibela kwiNkqubo yokuPolisha.I-Red Finishing Foam Pad ithambe ngokukodwa kulwakhiwo lwayo kwaye yenzelwe ukukhulisa ukubengezela kunye nokucaca ngaphambi kokufaka i-wax okanye itywina. isetyenziswe ngepolishi ekumgangatho ophezulu.
Egqithileyo ipolishi yegwebu yemoto kunye nephedi
Okulandelayo: I-Dual Actional Sander exhasa iPad kunye neHole Hole
Ipeyinti yoboya bokucoca iphedi yemoto
Eyogcino Pad Pad esirhabaxa Disc
ipolishi yegwebu yemoto kunye nephedi
I-Dual Actional Sander exhasa iPad kunye neHole Hole